ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံး Brand အဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် - SPORTS MYANMAR
ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံး Brand အဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ်
Brand Finance Football ကတော့ 2020 အတွက် အဆင့် သတ်မှတ်ချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကျော်ကြားဆုံး ဘောလုံး အမှတ်တံဆိပ်တွေ အဖြစ် ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင်းတို့က ဆက်လက် တည်ရှိနေကြောင်း သတ်မှတ်ပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါ ဆိုးကြီးကြောင့် ရီးရဲ မက်ဒရစ် ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် တန်းဖိုးဟာ 13.8% ရာခိုင်နှုန်း အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပေမယ့် ၊ ယူရို 1.419 ဘီလီယန် တန်ဖိုး ရှိနေဆဲ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ထိပ်ဆုံးကနေ ဆက်လက် ရပ်တည်သွားခဲ့တာပါ။
တန်ဖိုး အကြီးမားဆုံး ထိပ်ဆုံး 10 သင်း
1. ရီးရဲ မက်ဒရစ် ( ယူရို – 1.419 ဘီလီယံ )
2. ဘာစီလိုနာ ( ယူရို – 1.413 ဘီလီယံ)
3. ယူနိုက်တက် ( ယရို – 1.314 ဘီလီယံ )
4. လီဗာပူး ( ယူရို 1.262 ဘီလီယံ )
5. မန်စီးတီး ( ယူရို 1.124 ဘီလီယံ)
6. ဘိုင်ယန် မြူးနစ် ( ယူရို 1.056 ဘီလီယံ )
7. ပီအက်စ်ဂျီ ( ယူရို 967 သန်း)
8. ချဲဆီး ( ယူရို 949 သန်း )
9. စပါး ( ယူရို 784 သန်း)
10. အာဆင်နယ် ( ယူရို 719 သန်း)
“ စပိန် ရဲ့ အင်အားအကြီးဆုံး အသင်းကြီး နှစ်သင်းဟာ ဘောလုံး လောကရဲ့ အရှိန်အဝါ အကြီးမားဆုံး ပုံရိပ်တွေ ဆိုတာ ဒီကနေ့ ရလာဒ်က သက်သေပြသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ စပိန် အားကစား လောကအတွက်ရော ၊ နိုင်ငံ့အတွက်ပါ ဂုဏ်ယူချင်စရာပါ” လို့ Brand Finance ရဲ့ ဒါရိုတ်တာ ဖြစ်သူ တီရီဆာ ဒီ လီမတ် က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလာဒ်တွေ အရ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ရဲ့ ပုံရိပ်ဟာ ထပ်ပြီး တိုးတက်လာနိုင်ချေတွေ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီရာသီမှာ လာလီဂါ ဖလား အောင်မြင်မှုကို ရယူနိုင်ခဲ့သလို ၊ နည်းပညာ လုပ်ငန်းတွေ နဲ့ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ပြီး Real Madrid Next , PPV ချန်နယ် တို့ကိုပါ မိတ်ဆက် နိုင်ခဲ့တာမို့ ၊ နောက်ထပ် ဖန်အသစ်တွေ ဆက်လက် တိုးပွားလာဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
ဘာစီလိုနာ ကတော့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ဆိုးကြီးကြောင့် ဘဏ္ဍာရေး ပိုင်းမှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်ခံခဲ့ရသည့်တိုင်အောင် ၊ အသင်း ပုံရိပ် ပိုင်းမှာ 1.4% တောင် တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၊ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ရဲ့ နောက် ယူရို6သန်း အကွာလေး နဲ့သာ ကပ်လျှက် ရပ်တည်နေတာပါ။
သူတို့ အသင်းရဲ့ ပြသနာတွေ ဟာ ကလပ်အတွင်းမှာပဲ ဖြစ်ပြီး ၊ မူလ ရည်မှန်းထားတဲ့ ဝင်ငွေ 1 ဘီယံ နီးပါး အထိ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့လို့လဲ စီးပွားရေး ပုံရိပ်တွေမှာ ထိခိုက်မှု နည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ အားကစား လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖြန့်ကျက် နိုင်ခဲ့သလို ၊ နူးကမ့်ကွင်းကြီး အဆင့်မြှင့်တင် နိုင်ဖို့ အတွက် စပွန်ဆာကြေး ယူရို သန်း 200 အထိ ရှာဖွေ နိုင်ခဲ့တာတွေ က သူတို့ ရဲ့ မှတ်တိုင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန် မှာတော့ အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် တန်ဖိုးက 18.8% အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး ၊ မန်စီးတီး က 10.4% နဲ့ ယူနိုက်တက် 10.7% အထိ အသီးသီး ကျဆင်းခဲ့ပါတယ် သို့သော် ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ လီဗာပူး ကတော့ 6% အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ၊ တစ်ချိန် က မဟာပြိုင်ဘက်ကြီး ဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက် နဲ့ ပုခုံးချင်း ယှဉ်ဖို့ အတွက်တောင် နောက်ကနေ အရှိန်အဟုန် ကောင်းတစ်ခု နဲ့ လိုက်လာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်တံဆိပ် တန်ဖိုး ဟာ ကလပ် အသင်းတွေ အတွက် အရမ်းကို အရေးပါတဲ့ ညွှန်းကိန်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၊ အထူးသဖြင့် စပွန်ဆာကြေးတွေ ကို သတ်မှတ်ချုပ်ဆိုကြတဲ့ နေရာမှာ အဓိက နေရာက မှီငြမ်းလေ့ ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဒီ ညွှန်းကိန်းဟာ ကွင်းတွင်း ဆက်တိုက် အောင်မြင်မှုတွေ ကိုလဲ တိုက်ရိုတ် ကိုယ်စားပြုလျှက် ရှိနေပါတယ်။